ko htike's prosaic collection: Rambo နှင့် ကျွန်တော့် အတွေးများ
Rambo နှင့် ကျွန်တော့် အတွေးများ
Are you bringing any weapon?
Off course Not ...
(From Rambo dialogue)
RAMBO4တဲ့။ ........... ဟုတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာ တချိန်က အင်မတန် နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ RAMBO series နောက်ဆက်တွဲ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို နိုင်ငံတကာမှာ အခု ရုံတင်ပြသနေပါပြီ။ ထုံးစံ အတိုင်း RAMBO ဇာတ်လမ်းအရ အကြမ်း အရမ်းတွေ အပြည့်နဲ့၊ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့ စစ်ဒေသ ဇုံထဲမှာ လှုပ်ရှားတဲ့ စစ် အက်ရှင်ဇာတ်လမ်း တစ်ခုပါပဲ။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လက်နက်အားကိ်ုး လူရမ်းကားတွေရဲ့ လက်နက်မဲ့ အပြစ်မဲ့သူတွေအပေါ် လူမဆန်စွာ ပြုမူနေမှုတွေကို RAMBO က ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းပေးတဲ့ ဇာတ်အိမ်တစ်ခုပါ။ သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။
အဲ ... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ မျက်စိနဲ့ ကြည့်တဲ့ အခါ ထူးဆန်းမှု တစ်ခုကို မြင်ရတော့တာပါပဲ။ မြန်မာစကားပြောပြီး၊ မြန်မာ့နိုင်ငံ နောက်ခံပါတဲ့ Hollywood ဇာတ်လမ်းဖြစ်လို့ ထူးဆန်းတာလား လို့ မေးချင် မေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ယခင်က STEALTH ဆိုတဲ့ ဗုံးကျဲလေယဉ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Hollywood ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာလဲ မြန်မာနိုင်ငံ နောက်ခံ ပါခဲ့ဖူးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေ မျက်စိထဲ ထူးဆန်းသလို ခံစားမိတာကတော့ အနှစ် ၄၀ ကျော် လုံးလုံး ကယ်တင်ရှင် မြန်မာ့ တပ်မတော် ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ရုပ်ရှင်တွေထဲ အကြောင်းအရာ ထပ်နေအောင် ကြားနေရတဲ့ သူရဲကောင်း မင်းသား တပ်မတော်က ဒီနေ့ RAMBO ဇာတ်လမ်းမှာတော့ ကမ္ဘာသိ လူယုတ်မာ တပ်မတော် ဖြစ်လို့ နေတာပါပဲ။ အရင်က အရပ်ထဲမှာ ပြောနေတဲ့ စကားတွေလို ... ဗိုလ်ကြီးတို့ လာမှ ကျွန်မတို့ ရွာလည်း ပြာကျ တော့တာပါပဲတို့ ..... ဗိုလ်ကြီးတို့ လာမှ ကျွန်မတို့တွေ ...( မရိုသေ့စကား) -ာဖြစ် တော့တာပဲတို့ ဆိုတာတွေ အခု RAMBO ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကမ္ဘာကို သိအောင် ရိုက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ လူကြမ်းက မင်းသား ဖြစ်လာတာလား၊ မင်းသားက လူကြမ်း ဖြစ်လာတာလား မသိပါဘူး။
အနှစ် ၄၀ ကျော်ကြာအောင် ရိုက်ပြခဲ့တာတွေ မှန်တယ်၊ မှားတယ်၊ RAMBO မှန်တယ်၊ မှားတယ် ဆိုတာ ပြောမနေချင်ပါဘူး။ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ရန်ကုန်မြို့ လယ်ခေါင်မှာတောင် လက်နက်အားကိုးနဲ့ ရက်စက်ပြနေတဲ့ နအဖက လူသူလက်လှမ်းမမှီနိုင်တဲ့ တောထဲမှာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာကို အသိတရားရှိတဲ့ လူတိုင်း တွေးကြည့်ကြမှာပါ။
ဒီတော့ အခု RAMBO ဇာတ်လမ်းကိုသာ မြန်မာနိုင်ငံ တ၀ှမ်းက ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ တင်ခွင့် ပြသခွင့် ရပြီး၊ ပြည်သူတွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြည့်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ရုံထဲမှာ ပြည့်နေမလား၊ .... မဟုတ်တာတွေကို လုပ်ကြံရိုက်ပြတဲ့အတွက် ဆိုပြီး လူမရှိဘဲ ခြောက်ကပ်နေမလား ...? လွတ်လပ်ခွင့် လုံးဝ မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တပြည်အတွက် မဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကို၊ ကြောင်ရေချိုးပေးဖို့ ကြံသလို ကျွန်တော် စဉ်းစားနေမိပါတော့တယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 02:14
28 January 2008 at 16:35
i haven't watched the whole movie... but i've seen parts of it... when i saw the scene Rambo shootingamilitary guy, i feel ambivalent... it's kind of good to see these dogs r being killed... but on the other side, i feel like "r we supposed tobhappy to see our nationalites being killed byaforeigner???" i don't know exactly... but it's suchahorrible situation that we r supposed to feel happy to see other nationalies cruelly killing our own people... anyway, we have to try our best for the sake of our own country... May peace in Burma!!!
31 January 2008 at 21:49
一葉晴貼影片一葉晴貼影片一葉晴貼影片一葉晴貼影片一葉晴貼影片一葉晴貼影片一葉晴貼影片一葉晴貼影片一葉晴貼影片一葉晴貼影片aa片免費看aa片免費看aa片免費看aa片免費看aa片免費看aa片免費看aa片免費看aa片免費看aa片免費看aa片免費看aa片免費看☆♀ 電話交友☆♀☆♀ 視訊美女觀看免費 ☆♀☆♀ 成人哈啦聊天室☆♀☆♀ 視訊美女觀看免費 ☆♀☆♀ 激情網愛聊天 ☆♀☆♀ 成人卡通電影 ☆♀☆♀ 免費辣妹視訊聊天網 ☆♀成人遊戲區激情網愛聊天☆♀ 成人小說 ☆♀☆♀ 激情網愛聊天 ☆♀☆♀ 成人遊戲區 ☆♀影音Live秀★168視訊美女★★偷窺視訊聊天室★★影音視訊聊天情人網★★情色漫畫★★辣妹妹影音視訊聊天室★★888視訊聊天室★★ 免費音樂試聽★★網路視訊聊天室★網友一夜情聊天室★ 視訊美女影音★★網路視訊聊天室★★影音視訊聊天情人網★☆♀ 成人哈啦聊天室 ☆♀一夜激情網愛聊天室☆♀ 080辣妹聊天室 ☆♀網愛成人聊天室☆♀ skype網愛 ☆♀☆♀ 網愛bbs ☆♀☆♀ 激情網愛聊天 ☆♀☆♀ 網愛俱樂部 ☆♀網友一夜情聊天室ut影音視訊聊天室★視訊聊天交友★激情網愛聊天★一夜激情影音聊天室★真人視訊影音聊天★華人影音視訊聊天情人網★★台北一夜激情聊天室★★外公外婆聊天室★孤男寡女聊天室一網情深聊天室情人皇朝聊天室真愛宣言聊天室☆♀ 自拍偷拍影片 ☆♀☆♀ 影音交友 ☆♀☆♀ 一夜情影音交友 ☆♀火辣美女☆♀ 火辣美媚 ☆♀☆♀ 辣妹視訊聊天 ☆♀☆♀ 成人電影下載 ☆♀☆♀ 情色成人影片 ☆♀☆♀ 情色影片下載 ☆♀☆♀ 美女視訊聊天 ☆♀情色影音聊天☆♀ 情色視訊聊天 ☆♀成人視訊聊天※a片線上試看※sex520免費影片※※線上 aa 片試看嘟嘟※&甜心寶貝直播貼片&※免費視訊聊天室※※激情成人網愛聊天室※※線上免費a片觀看※免費a長片線上看※免費線上a電影直播※※線上免費觀看小電影※※免費色咪咪影片網※※免費檳榔西施摸奶影片※影音Live秀ez網愛聊天室♀ 找網愛聊天室 ☆☆♀ 888視訊聊天室 ☆♀♀ 真人視訊影音聊天※免費影片線上觀賞※watchshow TV情色視訊交友※s383情人視訊※※免費視訊聊天室 AV線上影城※FF-FST免費視訊聊天網※aa片免費看影片※※免費a片下載※
13 April 2009 at 16:05